Sezihoxisiwe izimpi ebezizoba KwaNongoma ngeSonto - Impempe
Sezihoxisiwe izimpi ebezizoba KwaNongoma ngeSonto
UThulani Magudulela ongumphathi weLudonga Boxing Promotions
Basale bekhexile abashayisibhakela abese bevivile bethi bazolwa ezimpini ebezihlelwe ukuba KwaNongoma ngeSonto ntambama kulandela isinqumo sokuzihoxisa esithathwe sekubalwa amahora bangene eringini.
Isitatimende esikhishwe yinhlangano eyengamele isibhakela kuleli, iBoxing South Africa (BSA) siveza ukuthi isizathu sokumiswa kwalezi zimpi kube wukwesabela ukuphepha njengoba kusadlange iCovid-19 nje.
“Kuyizindaba ezimbi ukuthi simemezele ukuhoxiswa kwezimpi ebezihlelwe yiLudonga Boxing Promotions ebezizoba namuhla (ngeSonto)…
“Isinqumo sokuzihoxisa kufinyelelwe kuso ngemuva kokuvela kwezikhalo zokusaba ngesimo sokuphepha kwiCovid-19, iBSA ngokuhlanganyela nomhleli wezimpi noMnyango wezeMidlalo KwaZulu-Natal bakubone kufanele ukuba lo mcimbi uhoxe,” kusho leso sitatimende.
Siqhube sathi njengoba izwe lisazama ukuphuma ekuhlaseleni kwesibili kwaleli gciwane eselibulele inqwaba yabantu, akumele kwenziwe imicimbi noma imiqhudelwano ezohlanganisa abantu abaningi.
“Kubalulekile ukuthi yize sifuna ukubuyela esimweni esijwayelekile, singazitholi sekuyithi esigqugquzela izimo ezenza kube lula ukuthi leli gciwane lande.
“Siyaxolisa kakhulu kubashayisibhakela, amathimba abo nabo bonke abebezohlanganise nalo mqhudelwano. Siyabonga nakuMnyango wezeMidlalo eKZN ngokweseka kwabo kulesi sikhathi esinzima.
“IBSA izomeseka umhleli walezi zimpi uma esephinda ezama ukuziqhatha esikhathini esizayo,” kuphetha isitatimende.
Kulezi zimpi bekuseqhulwini eyesicoco seWBF esisindweni seMiddleweight obekuzoximfizana kuyo uKhumbulani “Flint” Mdletshe nensizwa yaseTanzania u-Ibrahim Tamba.
Bekungakacaci ukuthi zizophinde zilwe nini lezi zimpi kodwa Impempe izolulandela udaba ithole kuThulani Magudulela ongumphathi weLudonga ngokuzokwenzekani ukusuka manje.
Previous Previous post: Ubazi kahle ubunzima obubalinde eBotswana uZinnbauer wePirates
Next Next post: UMcCarthy waMaZulu uthi akayisabi qobo iSwallows esiminye abaningi